राधा र कृष्णको प्रेम किन सफल भएन, यी हुन मुख्य ४ कारण ! – Gandaki Chhadke
राधा र कृष्णको प्रेम किन सफल भएन, यी हुन मुख्य ४ कारण !
एजेन्सी– जब साँचो प्रेम र विश्वासको कुरा हुन्छ, तब सबैभन्दा पहिला भगवान् श्रीकृष्ण र राधाको प्रेम जोडिन्छ ।कसैको प्रेम सफल हुने बित्तिकै हामी वाह ! कस्तो प्रेम राधा-कृष्णको जोडीजस्तो लगायतका शब्दबाट तारिफ गर्छौ । तर, राधा र कृष्णबीच अत्यन्तै निकट प्रेम भए पनि विवाह भने हुन सकेन । किन त ?आज हामी तपाईलाई श्रीकृष्ण र राधाको प्रेम किन विवाहरुमा परिणत हुन सकेन भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदै छौ ।यी हुन् ४ कारण- १. राधाको इ’न्कार: यस्तो पनि मान्यता छ कि, राधाले श्रीकृष्णसँग विवाह गर्न इ’न्कार गरेकी थिइन् ।
किनभने उनलाई लाग्थ्यो कि, उनी महलको जीवनका लागि बनेकी थिइनन् ।उनी एक ग्वा’ली थिइन् । तर, मानिसहरु श्रीकृष्णलाई कोही राजकुमारीसँग विवाह भएको हेर्न चाहान्थे । श्रीकृष्णले राधालाई सम्झाउन धेरै को’शिस गरे तर, राधा आफ्नो दृ’ढताबाट पछि स’रिनन् ।२. समाजका कारण: भनिन्छ, सामाजिक नियमको द’लदलमा फ’सेर राधा कृष्णको प्रेम कहानी अ’धुरो भएको थियो । उनीहरुको प्रेमका बीच पनि सामाजिक नियमले ख’लनायकको भुमिका खेल्यो । राधा र श्रीकृष्णलाई सामाजिक पृष्ठभूमीले उनीहरुको विवाहको अनुमति दिएन ।
३. श्रा’प: व्रह्मवैवर्त पुराणका अनुसार पृथ्वीमा आउनु भन्दा अगाडि राधाको श्रीकृष्णकी सेविकासँग ब’हस भएको थियो । जसका कारण श्रीकृष्णकी सेविकालाई राधाले रा’क्षसरुपमा पैदा हुने श्रा’प दिइन् । श्री’दामाले पनि राधालाई उनी मानवरुपमा ज’न्मिएका बेला आफ्ना प्रि’यतमसँग १०० वर्षको लागि बि’छोड हुने श्रा’प दिएकी थिइन् ।४. प्रेम र विवाह दुई फरक कुरा: भनिन्छ, भगवान् श्रीकृष्णले राधासँग यसकारण पनि विवाह गरेनन् उनी यो सा’बित गर्न चाहान्थे कि प्रेम र विवाह फरक कुरा हुन् । प्रेम एक निःस्वार्थ भावना हो भने विवाह एक सम्झौता हो वा अ’नुबन्ध हो । – एजेन्सीको सहयोगमा
मानहुँकोटको लो’भलाग्दो चर्चा, आउँछन् हजारौँ पर्यटक, पूर्वाधार थपिँदै